လက်မနှေးအောင် ကူညီချင်ပင်မဲ့ အကူအညီတောင်းခံကြ သူအရမ်းများပြီး ပြန်လည်မကူညီ နိုင်တာကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ စူးရှထက်…. – Shwe Naung
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ စူးရှထက် ကတော့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေ တွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ကာ လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးကို အားကြိုး မာန်တက် လုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေအားလုံး စည်းလုံး ညီညွှတ်စွာ ပြုလုပ်ကြတဲ့ နွေဦး တော်လှန်ရေးမှာ စူးရှထက်က လမ်းမ ပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်သလို အလှူ အတန်းမှာလည်း လက် မနှေးတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
သူမရဲ့ ချွေးနည်းစာ ငွေကြေးနဲ့ အလှူ အတန်းတွေ ပြုလုပ် နေတာ ဖြစ်ပြီး အလှူရှင် တွေနဲ့ စုပေါင်းကာ ဒီလိုကာလမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လှူဒါန်း ကုသိုလ်ပြု နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ချွေတာခဲ့သလို သူမရဲ့ကားကိုတောင် ရောင်းချကာ လိုအပ် တဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းပေးနေသူ တစ်ယေ ာက်ပါ ။
မကြာခင်နာရီ ပိုင်းလောက်က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကိုရေးသားဖော်ပြလာပါတယ် ။ သူမဆီကို ဒုက္ခရောက်လို့ အလှူလာခံ ကြသူတွေ များပြားကြောင်းနဲ့ သူမအနေနဲ့လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်ကူညီချင်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ဆိုင်လည်း မဖွင့်နိုင်သေးတာကြောင့်
အဆင်မပြေမှု တွေများစွာရှိနေလို့ ပြန်လည်မကူညီနိုင်တာ များစွာစိတ် မကောင်းဖြစ်နေမိကြောင်းကို ” အခက်ခဲဖြစ် နေတဲ့သူတွေကိုအကုန်ကူညီ ချင်တာပါ တကယ် စိတ်ရင်းနဲ့ပါ ကိုယ်ကလဲ သူဋ္ဌေးမဟုတ်တော့ အကုန်မကူညီ နိုင်တော့လို့ပါ အမှန်တိုင်း ပြောပြမယ် အမှန်တိုင်းပြောလို့လဲ အထင်သေးမယ်ဆို လဲအထင်သေး လို့ရပါတယ်
ကိုယ့်မှာပိုင်ဆိုင် တာဆိုလို့ ဆိုင်လေးရယ် ကားလေးရယ် ကားလေးကလဲ ရောင်းလှူလိုက် လို့ကုန်သွားပါပြီ ရှိတဲ့ဆိုင် လေးကလဲနိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ ပိတ်ထားရတယ် ဆိုင်ဖွင့်liveလွှင့် ရောင်းလို့ ရပေမဲ့ အများဒုက္ခရာက် နေချိန် မိုးခါးရေ မသောက် ရက်ပါဘူး ဆိုင်ကလဲ ဒီလကုန် စာချုပ် ချုပ်ရမယ် ဆက်ဖွင့်ရမလား ပိတ်လိုက် ရမလားမသိနဲ့
ကျွန်မ လမ်းတွေ ပျောက်နေပါတယ် ကျွန်မကရှိလို့လှူတာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်စားမဲ့ထဲက လျှော့စားပြီ လှူတာပါ ဒုက္ခရောက် နေတဲ့ သူတွေဘယ်လောက် များနေလဲဆိုတာ သိပါတယ် တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကျွန်မ cb မှာ စာတွေအဆောင် ပေါင်းမနည်းဘူး ကူညီချင်ပါတယ် အရမ်းကို ကူညီ ချင်တာပါ ကျွန်မမှာ တကယ်မရှိ တော့လို့ပါ ဒီစာ ရိုက်ရင်း
ကျွန်မဆန္ဒ တွေမ ပြည့်ဝလို့ မျက်တွေကျ နေရပါတယ် မကူညီ နိုင်တော့ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့် ” ဆိုပြီးရေး သားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးရင်း စူးရှထက် တစ်ယောက်လည်း အဆဆ အရာရာ အဆင် ပြေပါစေ ဆုတောင်းပေ းလိုက်ပါ တယ် ။
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
ငေးမောသွား ရအောင် ပုရိသတွေ ကို အလှတရားတွေ ထုတ်ပြ လိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင် ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို…
ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ် ဝမ်းနည်းတယ် အရမ်းချစ်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် တို့ရဲ့အဖွား ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ(၈)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ကွယ်လွန်…..